Pachave nekeke: Iyo kosi yePalmirinha inoshanda sei? Tsvaga pano!
Bhuruu Mbudzi: Chii icho? Chinangwa ndechei? Nzira yekudzivirira sei?
Carbohydrate: Ndivo chaivo vanopwanya kudya? Tsanangura kusahadzika kwako kwese!
Zvigadzirwa	 4 October 2018
Fica Iva NeKeke: Ziva kosi yaPalmirinha uye gadzira rako bhizinesi rekeke!
Uri kutsvaga kutanga bhizinesi rako wega, asi usingazive pekutangira? Zvakadii nezve kosi nemumwe weakanakisa vabiki muBrazil? Nekuti Fica Vai ter Bolo ndiyo kosi yaPalmirinha uye inokudzidzisa iwe mapepeti akanakisa kuve nebhizinesi rekutengesa makeke. Uye iwe unogona kutanga pamba chaipo! Kana iwe uchida kuziva zvese nezve kosi iyi uye yakasarudzika perks iyo inongova nevadzidzi chete, verenga uye uone kuti inoshanda sei.
Ndiani asina kumbobvira ada kubika chero mabikirwo aambuya Palmirinha kumba? Iye zvino zvave nyore, nekuti neiyo Fica Vai Ter Bolo kosi iwe yaunogona! Kosi iyi ine zvidzidzo zvevhidhiyo uye yakasarudzika kabhuku keresipi, kuitira kuti kunyangwe avo vasiri nyanzvi mukicheni vanogona kugadzira ese mabikirwo uye vane bhizinesi rakabudirira. Uye kuti utenge kosi iyi izvozvi nemamiriro akasarudzika uye uchiri kukwikwidzana nemabhonasi anoshamisa, iwe unongofanirwa kuwana yepamutemo webhusaiti www.ficavaiterbolo.com uye vimbisa nzvimbo yako mukirasi inotevera.
Iwe unogona achiri kubaya pane bhatani pazasi uye bhuku chigaro chako, asi ita izvi nekukurumidza sezvazvinogona, sezvo ivo vari mashoma uye anenge akatengeswa kunze. Usarasikirwa nemukana wekuve nemari yekuwedzera yakavimbiswa nemabikirwo ayo akabudirira!
[junkie-yambiro style = "tsvuku"] Attention! Hatitengesi kosi iyi, isu tiri webhusaiti ine matipi uye ruzivo, kutenga tinya pano kuenda kune webhusaiti yepamutemo [/ junkie-alert]
Ngani? Yakawanda sei yandichabhadhara iyo Fica pane pachave nekeke?
Kune avo vanotenga kosi yePalmirinha kunyangwe nanhasi, vanogona kuwana yakanyanya dhisikaundi uye vobhadhara chete $ $ 197 reais yekuwana mavhidhiyo ese ane makirasi, mabikirwo anotapira uye zvakavanzika zvakaita kuti Ambuya Palmirinha mumwe wevabiki vakanakisa mu Brazil. Pamusoro peiyo yakazara kosi, iwe unogashira yakasarudzika mabhonasi, uye chakanakisa chipo chinopihwa chete kune yekutanga zana vadzidzi veFica Vai ter Bolo kosi. Nekudaro, tenga nekukurumidza sezvinobvira kuhwina ichi chipo, pamusoro pekukwanisa kujoinha yakasarudzika facebook boka nevamwe vadzidzi uye tora mukana uyu wekusimudzira mutengo.
Uku kudzikisira ndekwenguva yakatarwa, uye munguva pfupi iri kutevera ichadzokera pamutengo chaiwo weR $ 597 reais, inovimbisa mutengo wakaderera nekutenga izvozvi pawebhusaiti yepamutemo!
Ndiani Palmirinha Kosi ye
Iyo Fica Vai ter Bolo da Palmirinha kosi yakanangana nevaya vari kutsvaga mari nyowani kana kuwedzera yavo yemhuri mari nekuita makeke kumba. Iyi kosi inogona kutorwa nevanhu veese mazera, asi yakakwana kune vakadzi vari kutsvaga yechipiri mari, kana kunyange nzira yekuwana rusununguko rwemari.
Nedzidziso dzakasarudzika uye hunyanzvi hwaunodzidziswa nePalmirinha Course, mumazuva mashoma unenge wave kugona mari dzese uye watove mukutengesa kwekutanga unenge uine mari yako zvakare uye uine purofiti. Tora mukana uyu kudzidza kubva kune mumwe munhu anga achidzidzisa akanakisa mapikicha kweanopfuura makore makumi matanhatu uye ari echokwadi echikafu chiitiko. Iyi kosi inochinja hupenyu hwako uye inowedzera mari yaunowana, iwe unongova nezvakanakira uye unozogamuchira akawanda ekurumbidza pamwe neako mabikirwo. Iva mubiki anobudirira uye uve nebhizinesi rako wega nerubatsiro rwemumwe munhu anonyatsonzwisisa chidzidzo!
Bhonasi ichave nekeke
Pamusoro pe mukana wekuti uve nebhizinesi rako wega uye ugone kuwana purofiti yakawanda nekutengesa zvinonaka zvekugadzira makeke, iwe unogashirawo mabhonasi akasarudzika ayo anongotenga pane yepamutemo webhusaiti iwe unayo iyi vimbiso. Pamusoro pezvidzidzo zvevhidhiyo zvakanyorwa naPalmirinha iye, iwe uchagamuchira ebook ine gumi akanakisa mapikicha uye zvakavanzika kuti mabikirwo ako abude akakwana. Uye zvakare, iwe unogashira pepa rekuisa kuti uise zvaunoshandisa uye kubhadharisa uye nekudaro uzive kuti uri kubatsirwa zvakadii kubva pane rako bhizinesi.
Uye hazvingogumira ipapo, unogashira bhuku rakasarudzika naPalmirinha sebhonasi, pamwe nekuwana mukana wekutaura mhenyu nemudzidzi wekosi iye uye mukana kune boka revadzidzi paFacebook, kwaunogona kuchinjana matipi uye zviitiko nevamwe vadzidzi hongu uye nekudaro ungatokwanisa kuwedzera bhizinesi rako.
Pamusoro pemabhonasi aya ese, kana iwe uri mumwe wevadzidzi vekutanga zana, iwe une yakanakisa kupihwa yekuhwina apuroni kubva kuPalmirinha Fica Vai ter Bolo kosi. Asi ichi chinopihwa ndechemhando yepamusoro zana, saka kurumidza uye utenge yako ikozvino kuchengetedza bhonasi.
Iyo kosi yakavimbiswa?
Wakatenga kosi asi hauna kuchinjika? Hapana dambudziko! Kunyangwe uine chokwadi chekuti uchada kosi yePalmirinha uye kuti iwe unozogona kuve nebhizinesi rako wega mumazuva mashoma pamba uye nemari yakaderera kwazvo. Une mazuva manomwe echirongwa chisina mvumo pane chako chigadzirwa. Iyo vimbiso inoshanda kubva panguva yaunowana yemahara kosi, uye kana iwe uchida kurega mukati memazuva manomwe, ingo tumira email kuFica Vai ter Bolo rutsigiro uye kumbira kudzoserwa mari yako. Inokurumidza uye yakapusa, mumazuva mashoma iwe unodzoserwa mari yako pasina chero hunyanzvi.
Chipo chausingakwanise kupotsa, tenga izvozvi kuti utore mukana weiyo yepamusoro mutengo kukwidziridzwa!
Pachave nekeke rine chitupa here?
Wapedza here makirasi ese mukosi? Ipapo iwe unogona kupurinda chako chitupa chekupedzisa iyo Fica vai ha Cake kosi, uine chitupa ichi iwe unokwanisa kuratidza vese vatengi vako kuti iwe wakatora Palmirinha Course uye wakadzidza akanakisa mapheka ekeke, kuwedzera kune zvakavanzika zvidiki izvo chete vadzidzi vanozoziva!
Iwe unozogashira kuwana kosi neemail pamwe neebook uye rinodhindwa chitupa, ziva kuti hapana chinhu chinozotumirwa kumba kwako. Ita shuwa kuti email yako ndeyechokwadi kuti ugamuchire zvese zvirimo uye unogona kutanga kugadzira mabikirwo nhasi!
Kudya kuti utsanangure: Heano matipi, chii chekudya, chii chaunofanira kudzivirira uye nezvimwe!
Zvakanakira kufamba: Ona kuti chiitiko ichi chingakubatsira sei!
Nzira yekuwedzera Testosterone: Ziva zvinotenderwa uye kwete kushandisa!
Melasma: Huya uone dambudziko rakakurumbira reganda!
Chishamiso muto: Mapepa ekudzora uremu kudya mushe! Detox, Dukan, Yakadzika Carb…